ဘာကြောင့် Facebook မအလုပ်လုပ်တာလဲ။ 8 ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက် | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဘာကြောင့် Facebook မအလုပ်လုပ်တာလဲ။ 8 ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်
အကြောင်းပြချက် Facebook ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဆာဗာများသည်ပြyourနာ၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အော်ပရေတာနှင့်မတော်တဆဖြစ်ပွားသည်အထိဆာဗာများအလုပ်လုပ်နေခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် Instagram နှင့် TikTok သို့အဓိကအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသောအငယ်ဆုံးလူငယ်များအကြားတွင်ရေနွေးငွေ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။
သို့သော်ယနေ့တွင်၎င်းသည်သုံးစွဲသူသန်း ၂ ဝဝဝကျော်လွန်နေသည် (ကုမ္ပဏီသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူအရေအတွက်ကိုကုမ္ပဏီမှတစ်ခါမျှမဖော်ပြသော်လည်း) ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook ကဘာလို့အလုပ်မလုပ်တော့တာလဲ။ သူတို့များသောအားဖြင့်တူညီကြသည် Instagram ကိုအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါသို့မဟုတ် WhatsApp ကိုချသောအခါအခါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ အခြားအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွေလိုပဲ ဆာဗာများအသုံးပြုခြင်းကိုမှန်ကန်စေသည် အသုံးပြုသူများသည်ပလက်ဖောင်းသို့တင်ထားသောအချက်အလက်အားလုံးကိုလက်ခံသည်။ ဤဆာဗာများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးဖြန့်ဝေနေသောကြောင့်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်သာဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မည်သည့်စက်နှင့်မဆိုပြ,နာရှိလျှင်ပလက်ဖောင်းသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေသည်။
4 Force app ကိုပိတ်ပါ
5 cache ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း
5.1 ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် cache ကိုရှင်းလင်းပါ
5.2 Android မှာ cache ကိုရှင်းပေး
5.3 iPhone ပေါ်တွင် cache ကိုရှင်းလင်းပါ
8.1 Android ပေါ်ရှိ application ကိုဖျက်ပါ
8.2 iPhone ပေါ်ရှိအက်ပ်ကိုဖျက်ပါ
Facebook မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးသင့်သည်မှာသေချာသည် ကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာများကျဆင်းနေသည်။ ထိုသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် Detector ချ။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများတွင်အသုံးပြုသူအဖြစ်အပျက်များကိုစုဆောင်းသည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်ဆာဗာများအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုမစစ်ဆေးနိူင်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Detector မှတ်တမ်းများ ကမ္ဘာတဝှမ်းဖြစ်ပွားမှုတိုင်းပြည်တွင်သာမဟုတ်ပါ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောအဖြစ်အပျက်များသည်အလွန်မများပါကပြlikelyနာကိုပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်တွင်မတွေ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသောအခြားဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေရပါလိမ့်မည်။ မင်းဆက်
iOS နှင့် Android နှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သောလေယာဉ်ပျံစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်ရှိဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုပိတ်ထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်း၏အမည်ကိုကောင်းစွာဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဝင်သောအခါမျက်နှာပြင်၏ထိပ်တွင်လေယာဉ်ပျံအိုင်ကွန်တစ်ခုကိုပြသသည်။
လေယာဉ်ပျံအသုံးစနစ်ကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းကိုမျက်နှာပြင်အထက်မှအောက်သို့ဆွဲ တင်၍ ထိပ်ဆုံးမီနူးကို ၀ င်ကြည့်ပြီးစမတ်ဖုန်းသည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရန်လေယာဉ်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။
ဆာဗာတွင်ပြtheနာမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အခြားဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားရမည်။ အဘယ်သူမျှမဝဘ်စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်လျှင်, နှင့် Mac ကိုသုံးတယ်, ကျနော်တို့သေချာတဲ့ inverted တြိဂံ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုမျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ပြသထားတယ်။
ဒါပါက Windows PC မှာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေညာဘက်ထောင့်ကိုသွားပြီးညာဘက်ကို ဦး တည်သည့် inverted တြိဂံကိုရှာရမည် (၎င်းသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်) ။ မရရှိလျှင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်သည် Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပါက၎င်းတွင်ပြလိမ့်မည် မျက်နှာပြင်၏ထိပ်, ဒီဆက်သွယ်ရေး protocol ကို (inverted တြိဂံ) ကိုကိုယ်စားပြုသောအိုင်ကွန်။ အကယ်၍ မရပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ထိပ်ကိုမျက်နှာပြင်အောက်သို့ဆွဲချပြီး Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုဖွင့်မထားကိုစစ်ဆေးရမည် (အကယ်၍ ၎င်းကိုစစ်ဆေးပါက၎င်းကိုအပြာ (iOS) သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင် (Android) ဖြင့်ပြလိမ့်မည် အရောင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းသည်ဖန်သားပြင်ထိပ်ပိုင်းရှိသရွေ့ဒေတာဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မည် 3G / 4G / 5G ကိုပြသထားသည် (သုံးခုထဲကတစ်ခု) ။ မရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်ဆက်သွယ်မှုကိုအမှတ်မထင်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုထပ်မံပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပေါ်ဘက်မှမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့လက်ချောင်းကို တင်၍ အင်တင်နာကိုကိုယ်စားပြုသောအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။
မသန်စွမ်း ဖေ့စ်ဘွတ်အက်ပလီကေးရှင်း၏မည်သည့်သွင်ပြင်ကိုမဆိုမှတ်ပါ လျှောက်လွှာ၏လည်ပတ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လွှာကိုလုံးဝပိတ်ထားရမည် ပထမနည်းလမ်းမှာပိုမိုမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ရန်၊ မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေမှပွတ်ဆွဲပါ လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားသော application အားလုံးကိုရယူရန်။ multitasking မှပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိနောက်တစ်ခုသည်ဘယ်ဘက်သို့လျှောက်လွှာကိုရှာ။ ၎င်းကိုရွှေ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်နောက်တစ်ခုသည်ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Application cache သည် application data, web pages များကိုသိမ်းဆည်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ပိုမြန်အားသွင်းနိုင်အောင်။ ဤမှတ်ဉာဏ်သည်မှတ်ဉာဏ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အရာများကဲ့သို့ကဲ့သို့အလိုအလျောက်ဖျက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ရမည်။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် cache ကိုရှင်းလင်းပါ
ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ cache ကိုဖျက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော browser ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera, Vivaldi ... Browser တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြရန်မဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းချန်ထားလေ့ရှိသည်) ငါမင်းကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်။
ဤလှည့်ကွက်သည် ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည် browser setting ကို menu ကို, ရှာဖွေရေး box ကိုသွားနှင့်ဝဲနှင့်ကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ "cache ကို" ရေးပါ။ လျင်မြန်စွာ, browser ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကသူ့ကွန်ပျူတာကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုမီနူးအတွက်တစ်ခုတည်းသော option ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
Android မှာ cache ကိုရှင်းပေး
Android ပေါ်ရှိ application cache ကိုဖျက်ချင်လျှင် application settings ကို menu မှတစ်ဆင့်ရယူရမည် ချိန်ညှိချက်များ - အစီအစဉ်များ - Facebook နှင့်ရှင်းလင်းအချက်အလက်များကိုနှိပ်ပါ။
iPhone ပေါ်တွင် cache ကိုရှင်းလင်းပါ
iOS တွင် cache ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဤ function ကိုပေးသော application များ၊ တိုက်ဆိုင်စွာတိုက်ဆိုင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသာကန့်သတ်ထားသည် Facebook မှာမရနိုင်ပါ.
ကွန်ပျူတာများတွင်ပြproblemနာတိုင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်အဖြေတစ်ခု၊ ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်စသည်ဖြင့်စက်ကိုပြန်လည်စတင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာနှင့်နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်နေပါက Windows နှင့် macOS နှစ်ခုစလုံးသည်၎င်းကိုသတိမပြုမိဘဲပြောင်းလဲသွားနိုင်သည် တစုံတခု အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဘရောင်ဇာ၏လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ကိရိယာပေါ်တွင်။
စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များတွင်မူအတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သော်လည်းဖြစ်ပျက်နေသည် လက်တွေ့ကျကျဘယ်တော့မှပိတ်ထားကြောင်းစက်ကိရိယာတစ်ခါတစ်ရံတွင် reboot ဖြစ်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမနာကျင်ပါ။ Facebook နှင့်သာမကအခြားလူများနှင့်ပါပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖျက်သိမ်း။ ပြန်လည်မထည့်သွင်းမီ Apple App Store နှင့် Google Play စတိုးဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးရမည် အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုရှာပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းအားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မှာပုံမှန်မဟုတ်ပါ။
လျှောက်လွှာလျှင် လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်ခဲ့ရသည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် application ၏ဗားရှင်းအဟောင်းများနှင့်အတူ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းအားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်သည်အဟောင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမွမ်းမံခြင်းကိုရပ်တန့်ပါက၎င်းဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် Facebook က Lite ကို အလွန်ပေါ့ပါးသည့် Facebook ဗားရှင်းသည်အဟောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်ရှိသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ပထမနေ့အဖြစ် Facebook application အတွက်နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုက၎င်းကိုဖျက်ရန်ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာမဆိုသဲလွန်စဖယ်ရှားလိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်မှာ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ဒီအဆင့်ကိုကျော်လိုက်ပါWindows နှင့် macOS နှစ်ခုစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည့် application ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမွမ်းမံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးရန် browser ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကြံပြုသည်။
Android ပေါ်ရှိ application ကိုဖျက်ပါ
Android မှာ application တစ်ခုဖျက်ဖို့, ငါတို့ရမည်ဖြစ်သည် အက်ပလီကေးရှင်းအိုင်ကွန်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ အက်ပလီကေးရှင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်အထိအိုင်ကွန်ကိုထိပ်သို့ဆွဲတင်ပါ။
iOS ပေါ်က Facebook application ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် application icon ကိုတစ်စက္ကန့်ကျော်လောက်ကြာအောင်နှိပ်ထားတယ်။ ပေါ်လာတဲ့ dialog box ထဲမှာငါတို့ရွေးလိုက်တယ် အက်ပ်ကိုဖျက်ပါ.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်အဟောင်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းအိုင်ကွန်ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် သူတို့ကခုန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်တွင် application icon ၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအနုတ်လက္ခဏာကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းကိုဖျက်ရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » ဘာကြောင့် Facebook မအလုပ်လုပ်တာလဲ။ 8 ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်
Windows 10 ရှိ“ ဤကွန်ယက် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ” ဘာလုပ်ရမလဲ။
LED နှင့် LCD ဖန်သားပြင်အကြားအဓိကခြားနားချက်များ